ဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 15, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Celebrity | 24 comments
ဒိန်း ဒက်..ဒက် ဝုန်း ဒိုင်း အုံး ဂွမ်း.. ကမ္ဘာပျက်မတတ် ပေါက်ကွဲသံများ ဆူညံပွက်နေသည်။ ပစ်ကွာ အလွတ် မပေးနဲ့.. ရှိသမျှ လက်နက်ကြီး အကုန်သုံး.. လေယဉ်ပေါ်ကနေ တန်၅၀၀၀ တောင်ဖြိုဗုံးချ၊ ပစ်မလွဲပဲ့ထိန်း တိုမာဟော့ခ် ခရုဇ်ဒုံးကျည်တွေ ပင်လယ်ထဲကလွှတ်ထည့်။ ကောင်းကင် ထောက်လှမ်းရေး ဂြိုလ်တုကို ၂၄နာရီ မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ခိုင်း.. ကုန်ကုန်ပြောမယ်ကွာ.. ညူကလီးယားဗုံးကြဲဖို့ပါ စီစဉ်ထား။ လူ့အခွင့်အရေး ဘာရေးညာရေး နောက်မှရှင်းမယ်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကမ္ဘာမြေက ဒင်းအစအန ပျောက်သွားရင် ကျေနပ်ပီ။ စစ်ရုံးချုပ် အမိန့်ပေး ဆက်သွယ်ရေးစက်မှလာသော တပ်ချုပ်ကြောင်ကြီး ကြိမ်းဝါးသံဖြစ်၏။ ကတုတ်ကျင်း အတွင်းပုန်း နေသူမှာ တိုင်းပြည် ဆူးညှောင့်ခလုတ် မဟာရမ်သူ တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီး (ခ) အီတွန့်ဗွမ် ဖြစ်သည်တမုံ့..
အမှန်တော့ ဤအရေးသည် ကျောင်းတော်က ဇာတ်လမ်းဆိုလျင် မှားအံ့မထင်၊ ၎င်းတို့နှစ်ဦး လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀က စစ်တပ်ကသိုကျောင်းဒေါ်တွင် လေးနှစ်တာ အတူတကွ ပညာသင်ကြားခဲ့သော ဗိုလ်လောင်း များဖြစ်ကြသည်။ ကျောင်းဆင်းသောအခါ ကြိုးစားရိုးသား ဘက်စုံထူးချွန်သော ကြောင်ကြီးက အကောင်းဆုံး ဗိုလ်လောင်းရွှေဓါးဆု ရရှိပြီး ရေသာခို အချောင်သမား အပေါ်ဖား အောက်ဖိ ကြေးမုံဂျီးကမူ အများကပေးသော အဟောင်းဆုံး လေဖားဆု ပေးခြင်းခံရသည်။ ထိုမှအချိန်မှစ၍ ကြေးမုံဂျီးတယောက် ဂျေဝင်ကာ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဖြစ်ရင်း ကြောင်ကြီးအား သွားပုပ်လေလွင့် တိုက်ခိုက်လေတော့သည်။ စစ်သားဂေါင်းကြောင်ကြီးမှာ ဒါတွေကို ဂရုမစိုက်အား အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသရှိ နယ်စပ်လုံခြုံရေးအား ဂရုစိုက်ရင်း ရင်မြေကတုတ်လုပ် စောင့်ရှောက် ကာကွယ်သဖြင့် အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့၆ကြိမ်၊ သီဟသူရဘွဲ့ ၅ကြိမ်၊ သူရဘွဲ့၎ကြိမ် ပေးအပ်ခြင်းခံရပီး ရာထူး အလီလီတက်၍ တပ်ချုပ်ကြီး ဖြစ်လာချိန်ဝယ် ကြေးမုံဂျီးမှာ ဘေးကင်းရန်ကွာ မြို့တွင် ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ခါ ရဟန်းရှင်လူ၊ကျောင်းသားပြည်သူအား နှိပ်စက်ကလူပြု ဗိုလ်ကျစိုးမိုးနေပေသည်။
ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ အဖျက်ခံရ၍ ကြေးမုံဂျီး အာဏာလက်မဲ့ ဖြစ်သွားသည်တွင် တရုတ်စပိုင်ယောင်ယောင် ဝသူပုန်လိုလိုနှင့် ရိုးသားသည့် ပြည်သူများအပေါ် ဂုတ်သွေးစုပ် အမြတ်ထုတ် စီးပွားရှာနေခဲ့သော ကြေးမုံဂျီး ဒီတချီ ဇာတ်သိမ်း မလှနိုင်ပြီ။ အခွင့်ဆိုသည်မှာ နှစ်ခါမရစကောင်း.. ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန် ရှင်းရသည်။ ဒင်း စော်ကားပေါင်းလည်း များခဲ့ချေပီ။ အတွေးစဖြတ်ရင်း တပ်ချုပ်ကြောင်ကြီး ဆက်သွယ်ရေးစက် ဖွင့်ကာ ကြောင်နတ်မှ လင်းယုန်.. ကြောင်နတ်မှ လင်းယုန် ဂွီဂွီ ဂွမ်ဂွမ်… ။
ကြေးမုံဂျီးကားလူလည်.. အလံဖြူကိုင်လျက် ကြောက်ပါပီ ကိုကိုကြောင်ကြီးရှင့်.. သာမီးကို ခွင့်လွှတ်ပါချင့်…. အချိန်မှီ လက်နက်ချဖို့ ကြိုးစားသော်လည်း နောက်ကျသွားချေပြီ.. ဗူးဆို ဖရုံမသီးသော တပ်ချုပ်ကြောင်ကြီးမှ စိတ်နာနာဖြင့်… ပစ်ကွာ အလံဖြူ တည့်တည့်ကို ညူကလီးယားဗုံး၊ ဒုံးကျည်၊ ဗုံး၊ အမြောက်၊ မော်တာ၊ အာပီဂျီ၊ စက်ကြီး စက်လတ် စက်လေး အကုန်ဆော်..။ အခြေအနေ မလှမှန်း ရိပ်စားမိသော ကြေးမုံဂျီး ဘန်ကာထဲသို့ ဒိုက်ဗင်ထိုး ပြေးဝင်လျက် တေဂျင်းဇိုး ကြောင်နာ၊ သူတပါးပြောဆိုခွင့် ပိတ်ပင်တဲ့အကောင်၊ လူသားစားချင်တဲ့ ကြောင်ဗူးဂျီး.. စုံစေ့အောင် ဆဲဆိုလေသည်။ သူမျှော်နေသော ကူမြူနစ်တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မဒေါ်ဂျီး လာမကယ်နိုင်ပြီ။ ပါးနပ်လိမ္မာသော ကြောင်ကြီးမှ ကေအိုင်အိုနှင့် ဝသူပုန်များအား ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံ ထူထောင်ခွင့်ပေးကာ တရုပ်နယ်စပ် ပိတ်ဆို့ထားလိုက်သောကြောင့်ပေတီး။
ကြေးမုံဂျီးမှ ကြောင်ကြီးအား အမြင်ကျဉ်းမြောင်းကြောင်း စွပ်စွဲနေဗုံ
မျှော်လင့်ချက် ကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်၍ နောက်ဆုံးရိက္ခာလက်ကျန် ဝက်သားပေါက်စီ စားမည်အပြု……အီတွန့်ဗွမ် အီတွန့်ဗွမ်.. ဆက်သွယ်ရေးစက် အသံမြည်လာသည်။ ရထားဖြစ်လား ရထားဖြစ်ရင် လက်မှတ်ခိုးစီး။ ကြေးမုံဂျီး မျက်နှာဝင်းကနဲ ဖြစ်သွားသည်၊ ကယ်တင်ရှင် ပေါ်ပြီတကား။ တဖက်မှ ဆက်သွယ်သူမှာ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OIC အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဟာရေး အာစွပ်လျှာပွတ် မာမွတ်ခိုမ်ဖြစ်မှန်း သိသည်နှင့် လက်ထဲမှ ဝက်သားပေါက်စီအား အလျင်အမြန် ဝှက်လိုက်ပြီး ဗီဒီယိုကင်မရာ ခလုပ်ဖွင့်လိုက်သည်။ ထို့နောက် အနောက်ဖက် မျက်နှာမူ၍ အိနြေ္ဒမပျက် ဖင်ဗူးတောင်းထောင် ဘုရားဝတ်ပြု နေပြလိုက်သည်တွင် မော်နီတာ စခရင်မ်မှ ကြည့်နေသော မာမွတ်ခိုမ်နှင့် အိုအိုင်စီအဖွဲ့ လူဂျီးများ လွန်စွာနှစ်ထောင်းအားရ ဖြစ်ကုန်ကာ….။
ကြေးမုံဂျီး နင် ဘာမှမပူနဲ့.. ငါတို့ကယ်တင်မယ်။ ကြေးမုံဂျီးကား ထီမထင်သော မျက်နှာပေးနှင့် အို. သေချင် သေပါ့စေ.. ဒင်းလို ရှိုက်တန်နတ်ဆိုး ပူးဝင်နေတဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကို တသက် အရှုံးမပေးဘူးရှင့်.. ဆလံမာရေးကွမ်း.. အားရမားဒစ္စကိုဒန်းစား…။ ထို့နောက်တွင်ကား ကြေးမုံဂျီးတယောက် လူသားဂျင်းစာနာမှု အစီအစဉ်ဖြင့် ဆော်ဒီလေကြောင်းလိုင်း ပထမတန်းမှစီးကာ တိုင်းပြည်ပြင်ပသို့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားလေသည်။
ဇာတ်လမ်းကား ဤမျှနှင့်မပီး.. အမျိုးသားရေး သစ္စာဖောက် တရုတ်သဗုံ ဘင်္ဂါလီ မွတ်ဆလင် ကြေးမုံဂျီး၏ အဖျက်အမှောက် လုပ်ရပ်များကို မနက်ဖြန် အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်းခန်းတွင် ဆက်လက် တင်ဆက်ပေးပါမည်။ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှု အားပေးဂျပါကုံ….
ဟီးးးးး အချက်အလက်သိပ်မစုရဘူးထင်တယ်။အပိုင်း ၂ မျော်
နေ ပါ ကြောင်းးးးး
ခြစ်ချင်ရာခြစ် ပစ်ချင်ရာပစ် ကျဲချင်ရာကျဲ…
ကျုပ် နံရိုးလေးကိုမထိရင် ပြီးတာပဲ… အား ဟိ
မနေ့က ဟိုမှာ သွားပြိး လက်ခုပ်လက်ဝါး တီးပြီးပြန်တော့.. ဒီမှာလည်း ပြန်လာပြီး လက်ခုပ် လာ ထပ်တီးပေးပါတယ်။
နှစ်ဖက်စလုံး ဘယ်သူ စော်စော် အားပေးတယ်.. ဟိဟိ..
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. အပျင်းပြေတာပေါ့နော်..
အင်းးးးးးးးး အသံပေါင်းကို စုံသွားတာပဲ။
မုံတစ်ပြန်ပြီးတော့ ကြောင်တစ်ပြန် လာပြီပေ့ါ။
(အလံဖြူ တည့်တည့်ကို ညူကလီးယားဗုံး၊ ဒုံးကျည်၊ ဗုံး၊ အမြောက်၊ မော်တာ၊ အာပီဂျီ၊ စက်ကြီး စက်လတ် စက်လေး အကုန်ဆော်..။)
ဆိုတာကတော့ လွန်လွန်းတယ်။ :harr:
ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကြေးမုံကြီးကို ကတုတ်ကျင်းထဲထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ ကြောင်က လူကိုစာနာလို့ဖြစ်မယ်။
တချို့ဆို အသက်ဘေးအတွက် ရေဆိုးမြောင်းထဲတောင် ၀င်ပုန်းရသေးတာဆိုတော့ကာ….
နှစ်ဖက်စလုံးကို အားပေးတယ် ..
ဦးကြောင်ကြီးရဲ့ သူရတံဆိပ်တွေ အိမ်မှာထားစရာမရှိရင် ဒီဘက်ပစ်လိုက်ပါဗျို့….။ သံတိုသံစတွေ ၀ယ်တဲ့ဆိုင်မှာ သွားရောင်းမလို့….
ဗေပုံ ထိပုံ ထီ..ဂျိ..ဗေပုံ ထိပုံ ထီ..ဂျိ..ဗေပုံ ထိပုံ ထီ..ဂျိ..
ကြေးမုံကြီးက တိုင်းပြည်ပြင်ပသို့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားလေသည် ဆိုတော့ ဘယ်နိုင်ငံကို သွားတာလဲ။ တပ်ချုပ်ကြောင်ကြီး ဘယ်လို ဆက်လုပ်မလဲ ဇာတ်သိမ်းမျှော်ရတော့မှာပေါ့လေ။
အဖြစ်မှန် မဟုတ်ပါ ။
တကယ်တော့ ကက်ချုပ်ကြီးကို ကြေးမုံဂျီး လက်နက်စုံ နဲ့ထုလို့ ဘန်ကာထဲကနေ အော်နေရရှာတာ ကက်ချုပ်ကြီးပါ … :harr:
ဟိုဘက်ပိုစ့်မှာ တွေ့လာတာလေး ပြန်ကူးပေးတာ။
ဂဇက်မှာ မင်န်ဘာ တသောင်းကျော် ရှိတဲ့အထဲ ကြေးမုံဂျီးရဲ့ ပေါက်ကရပို့စ်မှာ မှတ်ချက်ပေးသူ နှစ်ဆယ်ဆိုတော့ အင်း… ကျန်လူတသောင်း ဘယ်ဖက်မှာ ရှိသလဲ စဉ်းစားတတ်သူများ သိကြပါတယ်… :harr:
( လေယဉ်ပေါ်ကနေ တန်၅၀၀၀ တောင်ဖြိုဗုံးချ ) ဆိုတာဟာ
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ဝ နယ်မြေကိုထိုးစစ်ဆင်တဲ့အခါမှာ ပါဝင်တဲ့ ဗျူဟာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
နောက်နောင် ပြည်သူ့တပ်မတော်ရဲ့ ဗျူဟာတွေကို ရည်ညွှန်းရေးသားတဲ့သဘောတွေကို
အထူး ( အထူး ) ရှောင်ရှားပါလို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးလိုက်ပါတယ်
ကြေးမုံကြီး က ကိုယ့် နဲ့ အတိုက်အခံ တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးဘူး။
ဒါပေမဲ့ စကားလဲ မပြောဘူး တော့ မရင်းနှီးဘူး။
ကကြောင်ကြီး ကတော့ တစ်ချိန်လုံး ဒင်းတော့ ဘယ်အချိန် ဘယ်လို ကို့ရို့ကားရား ဂွ စကားပြောတော့ မလဲ စောင့်ကြည့်နေရတာ။
ပြသနာက အတိုက်အခံ လို ဖြစ်နေပေမဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ချင်း တူ သလို ဖြစ်လို့ စိတ်ထဲ အင်မတန် ရင်းနှီးနေသလို ရှိနေပေါ့။
ဒီတော့ သူတို့ နှစ်ယောက် ထသတ် ကြရင် ဘယ်သူ့ ဘက် နေသင့်သလဲ။
မှတ်ချက် – မြောက်ကိုရီးယား တောင်မှ အမေရိကား ကို ချိန်ထားတဲ့ ဒုံး ကြီးကို တောင် ပြန်သိမ်း သွားပြီ ဘဲ။ အတုယူကြပါလေ။
လှောင်ခြင်းမဟုတ်။ တော်ကြာ တကယ်ထပစ် နေမှ။
တွက်ထားတဲ့အတိုင်းကွက်တိပဲ။ ကြောင်ကြီးပိုစ့်တစ်ခုထပ်တင်မယ်ဆိုတာလေ။ အခုတော့ တစ်ခုမကဘူး နှစ်ခုတဲ့။
စုန်း ဘု ရင် says:
ဘူ့ကို ဘူကပဲ ချချ
ချသာချ ချသာချ မင်းဂရုမစိုက်နဲ့ …
မင်းတို့ချပြီး နာတို့က ၀င်မှာပဲ …..
ဘယ်ဘက်က တစ်ဆုပ်ကြဲပြီး ညာဘက်က တစ်လှည်းသယ်ရမယ်
N ဂျီ အို (ဂျီဟိုနှင့်ဘာမျှမတော်) အယောင်ဆောင်သူများ
သေမှပေးတဲ့ အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ ၆ ကြိမ်ရထားတာဆိုတော့
သေရွာက ၆ ကြိမ် ပြန်ရှင်လာတာပေါ့
ဖီးနစ်ကြောင်ကြီး ဗရာဗိုပါ၊ ချသာချ။
(မနေ့ကလည်း ကြေးမုန်ဂျီးကို မြှောက်ပေးပြီးပြီ)။
ဟီး ဟီး ကိုချိုကြီး မေ့နေပြီ…
ဗိုလ်တိုက်ချွန်း ရှိသေးတယ်လေ ဆရာရဲ့…
တပ်ချုပ်ဂျီးအူးကြောင်အနေနဲ့ အိုအိုင်စီက ဟာရေး အာစွပ်လျှာပွတ် မာမွတ်ခိုမ် ကိုရော ချေမှူန်းဖို့ အစီစဉ် ရှိ၊မရှိ သိလိုဘာဒယ်
ကိုကြောင်ကြီးပို့စ်မှာ ဝင်မန့်ရင်းနဲ့ နည်းနည်းလေး ပြင်ချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ ကို P chogyiရေ အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့က သေမှပေးတယ် ဆိုတဲ့ အချက်မျိုး မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ ဒီတော့ ကိုကြောင်ကြီးလည်း မသေပဲနဲ့ အဲဒီဘွဲ့ကို ရနိုင်ပါတယ်။ မသေပဲနဲ့ အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ ရတဲ့လူလည်း ရှိပါတယ်။ မြန့်မာတပ်မတော်က ချင်းလူမျိုး ဗိုလ်ကြီး အောင်ဆန်းသူရိယတိုက်ချွန်းက မသေပဲနဲ့ အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ကို ရခဲ့တဲ့လူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သတ္တိကောင်းပုံကလည်း ချင်းလူမျိုးတွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ်.. အောင်ဆန်းသူရိယ ဘွဲ့ က တတပ်လုံးသေပြီး တယောက်တည်း ကတုတ်ကျင်းထဲမှာ လွတ်ပြီး ကျန်သွားတဲ့ လူတွေ ရ တတ်လား ဟင်..
ဆူးရေ အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ကို အဲဒီလို ရခဲ့တဲ့လူ မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အောင်ဆန်းသူရိယလှသောင်း ကတော့ ညောင်ပင်သာရှမ်းစု စစ်မြေပြင်မှာ တတပ်လုံး ဆုတ်လို့ရအောင် တယောက်တည်း အသေခံပြီး နေခဲ့ပေးလို့ အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ ရခဲ့ပါတယ်။ အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး သူရသတ္တိ ဆုတံဆိပ်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ လုံးဝကို ရတဲ့လူ မရှိတော့ပါဘူး။ ချင်းလူမျိုး အောင်ဆန်းသူရိယ တိုက်ချွန်းကတော့ အလွန်ကို သတ္တိပြောင်မြောက်စွာနဲ့ စစ်တိုက်ခဲ့လို့ ဒီဆုကိုလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန်ကို ရခဲ့ပါတယ်တဲ့။ သူက အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ မရခင် သူရဘွဲ့ကို အရင်ရခဲ့သေးတယ်။
ဒီ ဂျီး နှ ဂျီး ကြားမှာ ဘက်လိုက်ပီးပြောတာမဟုတ်ဘူး နှယောက်စလုံးက အတိုက်အခိုက်တော်တယ်လို့တော့ကြားတယ် (တို့ကတော့အကျပ်သက်သက်)
ဦးမာဃ ဘွဲ့တံဆိပ်တွေ များလှ မှတ်နေတာ
ကိုယ့်ထက် များတဲ့ သူနဲ့ လာတွေ့ရတယ်လို့
လေးစားပါဒယ် တပ်ချုပ်ကြောင်ကြီး :salute: